Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! कृषिजन्य वस्तुको आयातमा बृद्धि, निर्यात घट्दो
कृषिजन्य वस्तुको आयातमा बृद्धि, निर्यात घट्दो
ग्लोबल संवाददाता मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८
झापा । नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा दुई गुणाबढी आयात बढेको छ । विगतमा यो नाका भएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढी हुने गरेको क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनामा रु. चार अर्ब १९ करोड ६० लाख छ हजार बढीको कृषिजन्य सामग्रीको आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सो अवधिमा नेपालबाट बङ्गलादेश, भारतलगायतका स्थानमा रु. दुई अर्ब २४ करोड ९७ लाख पाँच हजारको सामग्री मात्र निर्यात भएको कार्यालयका प्रमुख देविन्द्र शाहुले बताउनु भयो ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भटमासको ब्रान (पशु आहारका लागि) रु. एक अर्ब ९२ करोड ४६ लाख ५० हजार, भटमासकै दाना (तेलका लागि) रु. एक अर्ब छ करोड ४३ लाख ६४ हजारको बङ्लादेशबाट आयात भएको कार्यालय प्रमुख शाहुले बताउनु भयो ।
मूल्यको हिसाबले दोस्रोमा इन्डोनेसियाबाट सुपारी आयात भएको देखिएको छ । तीन महिनामा रु ३४ करोड पाँच लाख ६१ हजारको सुपारी आयात भएको छ । त्यसैगरी, भारतबाट ठूलो परिणाममा धान र चामल भित्रिएको छ ।
प्रमुख साहुका अनुसार भारतबाट रु. २३ करोड ९२ लाखको धान र रु आठ करोड ११ लाख ६४ हजारको चामल आयात भएको छ । तर, नेपालबाट भारत र बङ्लादेश अम्रिसोको कुचो निर्यात बढी भएको देखिन्छ । कार्यालयको तथ्याङ्कमा रु १६ करोड ३७ लाख ८० हजार मूल्य बराबरको अम्रिसो निर्यात गरेको देखिएको छ । यो नाकाबाट अलैँची, लसुन, मजिठो, अग्र्यानिक चिया, जडीबुटीजन्य पदार्थसमेत निर्यात हुँदै आएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २३, २०७८, ०९:५६:००